7 Sharci Oo Xaga Taleefanka Ah Oo Ay Tahay In Lamaaneyaashu Ku Dhaqmaan - Aayaha
Sida aad u isticmaashid telefoonkaaga ayaa si wanaagsan ama si xun u saameyn karta xidhiidhkaaga. Waxaad aaminsanaa kartaa in telefoonkaagu uusan qalalaase u keeni Karin xiriirkaaga, laakiin taasi waa been.
Waa kuwaan qaar kamid ah sharciyada loo baahanyahay in lamaane walba ay ogaadaan si ay iskaga ilaaliyaan isfaham darri soo kala dhex gasha.
1. Isticmaal ereyo macaan oo kalgacayl leh markaad xaaskaaga ama seygaaga wacdid. Sida “Hello macaanto/macaane, “hello xabiibi/xabiibti, waa qaar kamid ah noocyada tusaalaha ee hadalka lagu bilaabo markaad wacdid xaaskaaga/seygaaga, gabar ama wiil aad jeceshahay.
2. Sida wicitaanka aad ugu bilaawday ereyo macaan oo kalgacayl leh isla sidaas waa in wicitaanka uu ugu dhamaadaa; marka uu sidaas hadalka ku dhamaado waxaad ku jireysaa dareen wanaagsan xittaa marka uu wicitaanka dhamaado kadib.
3. In taleefanka ay lamaanaha kawada murmaan ayaa keeneysa waxyeelo ama dhaawac weyn. Way fududahay in wadahadalka taleefanka ay isku fahmi waayaan lamaanaha taasoo keeneysa dhibaato badan.
4. Ku sheekeysiga ama ku mashquulidda taleefanka markaad la hadleysid lamaantaada/lamaankaaga ayaa direysa fariin qaldan. Isku day in dareenka aad siiso lamaankaaga/lamaankaaga isla markaana aad xushmeyso markaad isla joogtaan.
5. Dhammaan taleefanada ku qabo lamaankaaga/lamaantaada horteeda. Markaad kala fogaato wicitaanada qaar, waxaad abuurtay shaki.
6. Iska ilaali in rag ama dumar kusoo wacaan waqti dambe; tani waxay keeneysa in xaaskaaga/seygaaga uu kaa shakiyo.
7. Mar kasta oo lamaankaaga/lamaantaada ay safar ku jirto wac si aad ula socotid xaaladdeeda/xaaladdiisa ama marka ay kusoo booqato haddii aadan hal meel kuwada nooleyn.